MACLUUMAADKA DINGO IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Dingo iyo Sawiro
Kani waa Lindy , Dingo oo loo kiciyey sidii xayawaan gurijoog ah. Lahaanshaha sawirka Nic Papalia, sawirka waxaa qaaday Jamie Sciban
Dingo Australiya ah
Eyga Dhaladka Australiyaanka ah
Dingo waxay leedahay indho daran oo midabkoodu ku kala duwan yahay huruud ilaa oranji. Dhagaha aad u guurguura, yaryar, wareegsan ayaa dabiici ahaan kacsan. Ceelka si fiican u xiiray, oo u muuqda mid hawd ah, dabada ayaa dabacsan oo dherer fiican leh. Xaga dambe waa caato iyo muruq. Koodhku waa jilicsan yahay. Dhererkeeda, cufnaantiisa, iyo qaabkeeda ayaa ku kala duwan cimilada. Midabada jaakadaha caadiga ah waa sinjibiil-jaalle, laakiin waxay ku dhici kartaa midab, madow ama caddaan, oo ay ku jiraan marmar albinos marmar ah ayaa sidoo kale la arkay. Dhamaan Dingoes saafi ah waxay leeyihiin timo cad cagaha iyo carada dabo.
Dingo waa nooc ka mid ah waligiis oo aan si buuxda loo dhaqan gelin. Marnaba looma haynin wehel ahaan. Tani waxay qayb ahaan sabab u tahay go'doominta fog, laakiin sidoo kale iyada oo aan la helin faragelin aadanaha. Dingoes aan la barin waa saaxiibbo cunug oo aan ku habbooneyn oo aan si fudud loogu tababaran karin adeecidda. Tababbarka adeecidda waxaa sida ugu fiican ku gaara naxariis, dulqaad, iyo gacan adag laakiin jilicsan. Diinjeeyada waxaa loo haysan karaa sidii xayawaan guri joog ah haddii laga qaado qashinka ka hor da'da 6 toddobaad. Da'daan da 'yarta ah waa la daajin karaa, laakiin mar ka badan 10 toddobaad waa in aan laga saarin duurka. Haddii si fiican loo tababaray loona daryeelay Dingo waxay samayn kartaa xayawaan aad u fiican oo gaar ah. Waxaa loo sheegaa inay awoodaan inay sameeyaan waxqabad iyo adeecid guud. Dingo waxay leedahay astaamo aan caadi ahayn-geed fuulis weyn mararka qaarna xoogaa ka fogaan, laakiin kuwani waa astaamo xiiso leh waxayna kujiraan isla qeybta ay isku dhow yihiin Dingo ilmaadeeradeed New Guinea eey heesaya iyo Spitz Finnish ah , laakiin soo bandhigida astaamo isku mid ah. Ma haystaan ​​shahaado isku mid ah ciriiriga ilkaha iyo daamanka oo gaagaaban oo kala soocaya eyda iyo awoowgood, Dhulkii Hindida ee Wolf. Sidoo kale sida yeyda, Dingo dheddigga waxay leedahay hal wareeg oo taranta sannad kasta. Si ka duwan eeyaha, Dingo wuxuu doortaa lammaane noloshiisa oo dhan, mararka qaarkoodna wuxuu u barooranayaa geeri ka dib markii la waayey lammaanihiisa. Badanaa a qashin yar yar waxaa laga helaa godka geedka, gebi ahaanba laga ilaaliyo dhinacyada oo dhan, iyadoo biyo xireenku uu ilaalinayo dhanka hore. Sidaas oo ay tahay, ardaydu had iyo jeer waxay u dhacaan ugaarsi abeesooyin. Qoysaska Dingoes waxaa laga maqlayaa iyagoo wada hadlaya kahor ugaarsiga. Waxay leeyihiin dareen wada shaqeyn oo xoog leh iyo baakadaha ku noolow . Kooxahani waxay caadeystaan ​​inay ugaarsadaan habeenkii. Waxay u shaqeeyaan si aamusnaan ah waxayna kaliya ka bartaan inay ka qayilaan la xiriirka canines kale. Waxay ku wada xiriiraan yelp ama qaylo gaar ah. Dingo waxay kaligood ku ugaarsan karaan ama unugyada qoyska, laakiin marar dhif ah ayey ku jiraan xirmooyin. Biyuhu waxay caqabad ku yihiin Dingoes-ka badankooduna way wareegi doonaan oo keliya, maaha inay dabaashaan. Dingo-ka Duurjoogta ah ayaa ka xishooda dadka waxayna dib ugu noqdeen duurjoogta. Si ay ugu noolaadaan cidlada, waxay barteen inay ku ciyaaraan posum, oo ay u dhintaan dhimasho. Dingo dhif ayay muujisaa gardarro. Sannado cadaadis ah ayaa soo saaray duulimaad halkii laga qaniini lahaa dabeecadda. Dingoes-ka labka ah ee loo haysto sida xayawaannadu aad bay u deggan yihiin inta lagu jiro xilliga taranka. Ey-eyda iyo xilliga taranka waa qiyaastii Maajo / Juun. Illaa iyo imminka eeydu waxaa laga heli karaa oo keliya gudaha Australia looma dhoofin karo, hase yeeshee tani way is beddeli kartaa maaddaama fannaaniinta Dingo ay riixayaan inay dadka ka wacyi galiyaan xayawaankan gaarka ah. Eydu waxay ku kacayaan $ 500 - $ 1000 Australian. Beer Dingo ah oo ku taal Australia wuxuu leeyahay in ka badan 100 dingo oo wuxuu daaqayaa eeyga si loo hubiyo inay ku dhowdahay barwaaqada 'khadka dhiigga ee saafiga ah.' Milkiilayaasha Dingo waxay u baahan yihiin inay soo bandhigaan awood dabiici ah. Deganaan, laakiin adag, kalsooni leh oo waafaqsan xeerarka. Ku habboon isgaarsiinta waa lagama maarmaan.
Dhererka: 19 - 23 inji (48 - 58.5 cm)
Miisaanka: qiyaastii 50 - 70 rodol (23 - 32 kg)
Si kastaba ha noqotee, eeyaha ilaa 120 rodol (55 kg) ayaa la diiwaangeliyey.
Dingo laguma talinayo nolosha guriga. Waa eeyaha duurjoogta ah ee haddii qoys loo geeyo, waa in aan lagu xirin silsilad deyrka dambe, laakiin ay tahay in loo qaato qayb ka mid ah qoyska. Xayndaab adag oo xayndaab ah ayaa lagama maarmaan ah. Dingo wuxuu u baahan yahay waxqabad iyo meel bannaan. Xayawaan ahaan waa inaan laga qaadin xadhigga beerta dhexdeeda. Waxay u adkeysan karaan cimilada kulul.
SUNTZU shih iyo isku dhafka yorkie for sale
Dingo waa xayawaan aan la-huwarin oo ay tahay inuu helo jimicsi fara badan. Marka la haysto waxay u baahan yihiin in lagu qaado a maalin kasta, socod dheer ama orod, si loogu qanciyo dareenkooda hijrada dabiiciga ah.
Wuxuu noolaan karaa inuu ka weynaado 20 sano.
Qiyaastii 1 ilaa 10 eey yaryar, celcelis ahaan 5
Koodhka Dingo ee u adkaysta cimilada ayaa is daryeela. Noocani ma laha ur ur leh.
Dingo waa xayawaan duurjoog ah oo uu keenay Australiya nin asal ah oo ku nool gobolka-ku-saleysan qiyaastii 4,000 sano ka hor. Waxaa la rumeysan yahay in Dingo uu yahay awoowe dhammaan noocyada eyga, kaydka aasaasiga ah ee 600 eyda runta ah. Eeyaha iyo dadka ayaa socodkoodii ka hor intaan Australia laga jarin dhul weynaha oo ay ku hareeraysan yihiin biyo. Kabtan William Damphier, oo wax ka qoray eeyga duurjoogta ah 1699, markii ugu horreysay wuxuu si rasmi ah u xusay Dingo. Asal ahaan waxaa haya qaar ka mid ah kooxaha Australiyaanka ah oo ah isha degdegga ah ee cuntada. Farac toos ah oo ka soo jeeda qowmiyadihii asalka ahaa ee ka soo jeeday Bariga Dhexe iyo koonfur bari Aasiya, Dingo wuxuu noqday mid waxashnimo leh wuxuuna ku noqday duurjoogta. Markii reer Yurub soo bandhigeen adhiga iyo bakaylaha, dadka Dingo way kobceen. Sababta oo ah Dingo wuxuu ku ugaarsanayay xoolaha dadka, xiriirka labadooda wuxuu ahaa mid aan hagaagsaneyn oo muran badan. Faragalinta nin ee cilmiga deegaanka ee Australia oo si isku dheelitiran ayaa asal ahaan loogu eedeeyey Dingo. Maanta dad yar ayaa hadda ka welwelsan eeyga u dhashay 'fosil nool' waxayna ka shaqeynayaan sidii ay u baran lahaayeen una ilaalin lahaayeen. Ururka Tababbarka Eyga Dhaladka ah ee Ustaraaliya, oo xarunteedu tahay New South Wales, ayaa koriyey oo tababaray Dingoes badan. Xubnahoodu waxay soo bandhigeen oo ay qabteen adeecid iyo mudaharaadyo khiyaano leh iyo halkudhigga bulshada ayaa ah 'A Fair Go For Our Dingoes'. Eeyahaani si fudud ayey dib ugula dhaqmaan guriga haddii laga soo bilaabo da'da yar qoys ahaan, laakiin waxay ilaaliyaan astaamaha duullimaadka iyo feejignaanta. Meelo badan oo Australia ka mid ah wali waxaa loo arkaa inuu yahay xayawaan sharci ahaan looma hayn karo. Meelaha kale waxay leeyihiin shuruudo ogolaansho adag. Dawladda Federaalka ee Australia waxay u aqoonsan tahay Dingo inay yihiin duurjoog mana laga yaabo in la dhoofiyo marka laga reebo iyo in la diiwaan geliyo lana ogolaado jardiinooyinka duurjoogta ah iyo xadiiqooyinka. Dingoes waa dhif iyo naadir in dibedda Australia. Maanta Dingo looma tixgeliyo eey run ah, laakiin waxaa loo kala saaraa inay yihiin noocyo gaar u gaar ah oo ka mid ah kaneecada leh magaca sayniska ee canis lupus dingo.
Talli the Dingo oo 8 sano jir ah oo taagan geed hoos u dhacay— Iyadu waa qaybta ugu qaalisan ee qoyskeenna. '
Dingo Qaangaar ah
Lindy , waxaa iska leh sawirka Nic Papalia
Lindy , sawirka waxaa iska leh Nic Papalia, sawirka waxaa qaaday Jamie Sciban
Ogeysiiska Nic Papalia— 'Waxaan hayaa DVD sameynta si gaar ah si aan u siiyo aragti iyo xaqiiqda dhabta ah iyo aragtida ku saabsan xayawaanka la yaabka leh ee saaxiibtinimada leh. Dingoes waxay samaystaan ​​xayawaano waaweyn! '
Phoenix the Dingo oo ah 2 1/2 sano jir ka yimid Australia— Noolaha ugu cajiibka badan ee aan waligeen sharaf u yeelanay lahaanshaha. Ka hadal Waxgarad, caqli badan, kalgacal iyo dabacsanaan! Tan ugu muhiimsani maahan, oo waxaan ku iri 'MA AHAY EY'! Tababar, HUH nasiib wacan, haa waad baran kartaa waxyaabo qaar laakiin ka hadal * Madax-bannaanida Maskaxda! Noloshaada / qaab nololeedkaagu Waa inuu isbeddelaa. Dhawaan waxaad baran doontaa waxa dingoes, waa dingoes iyo waxaaga waa dingoes haha. Laakiin jacayl baan ku dhacay '
Phoenix the Dingo oo ah 2 1/2 sano jir ka yimid Australia
Lahaanshaha sawirka Dingo Farm
Eeg tusaalooyin badan oo ah Dingo
Sawirada Dingo 1
Ku saabsan Lindy the Dingo
Dingo Maaha Eray Wasakh Ah
reer galbeedku wuxuu ku arkay dhibco orb sun leh
arrimaha caafimaadka ee 'merle cocker spaniel'
isku qas qaswadaha feer wadaha
sawirada buluuga cagajuglaynta buluugga ah
sida loo ilaaliyo nadiifinta sanduuqa whelping
madow iyo caddaan bullaacad bullaacad
intee ayey le'eg yihiin cayda dadka cayda ah